Fiofanana Tafika masina – FJKM Ambavahadimitafo Fiofanana Tafika masina |
Fiofanana Tafika masina
A. Baikon’ny Tompo , Marka. 16:15 ; Jaona. 20:21
Tsy hiadian-kevitra ny maha baiko ny fitoriana ny Filazantsara. Io baikon’ny Tompo io dia tsy mila hoe antony hafa na mila hamarinina vao mendrika ho tanterahina. Ampy io fototra ara-tSoratra Masina io. Hitory ny Fitiavan’Andriamanitra isika, Fitiavana izay notanterahiny tamin’ny nanomezany ny Zanany Lahitokana nohomboana teo amin’ny Hazofijaliana hisolo heloka antsika. Hitory isika hoe efa vitan’Andriamanitra ny famonjena antsika, fa ny anjarantsika sisa dia ny mandray an’io famonjena io.
Ity misy sary enti-manazava kokoa an’izay : Mangetaheta ianao. Misy rano amin’ny kaopy eo anoloanao. Raha jerenao fotsiny io rano io, na dia eken’ny sainao aza ny fisian’io rano io, raha tsy raisinao ary sotroinao io rano io dia tsy afa-ketaheta ianao. Toa izany koa ny Famonjen’Andriamanitra.
Raha jerenao fotsiny, na dia eken’ny sainao aza ny fahatanterahany, raha tsy raisinao io Famonjena io dia ho very ianao. Hitory an’i Jesoa Kristy voahombo isika, ary hilaza hoe : Raiso Izy, fa Izy irery ihany no Mpamonjy.
Koa mangataha hery amin’ny Tompo mba hahatanterahanao sy hiainanao an’io baiko io.
B. Hitory isika
1. Rehefa mitory, dia aza manao hoe : « Hitory aminy aho, mba ho voavonjy ny fanahiny ». Tsy anjarantsika mpitory no manapa-kevitra na ho voavonjy ny fanahiny, na tsia. Ny anjarantsika dia ny manambara aminy ny Fitiavan’Andriamanitra azy, ary hoe raiso io Fitiavan’Andriamanitra io raha te ho voavonjy ianao. Ary safidiny sisa na handray na tsia io Fitiavan’Andriamanitra io.
Ny anjarantsika dia ny mamafy fa ny vokatra dia an’Andriamanitra irery ihany. Mivavaha ho an’ireo notorianao mba hifidy ny fiainana izy ireo, dia ny fandraisana an’i Jesoa Kristy.
2. Ny fitoriana an’i Jesoa Kristy dia fotoana lehibe iray ahafahanao maneho fitiavana. Iainan’izay manana Azy, fa ny fandraisana, ny fananana an’i Jesoa Kristy dia fananana antoka fa voavonjy ny fanahinao, mandova ny fiainana mandrakizay ianao.
Tsy izany ihany, na dia io aza no tena lehibe indrindra, fa ny fananana an’i Jesoa Kristy dia fanafahana anao dieny mbola ety an-tany, fanafahana anao amin’ny tahotra, ahiahy, Taloha, fantatrao ny tenim-pitiavan’Andriamanitra, fantatrao ny fanomezan-toky, ny teny fampaherezana toa ny hoe :
« Aza matahotra ianao, efa nanavotra anao Aho, efa niantso ny anaranao Aho, Ahy ianao »,
na ny hoe :
« Raha ny Tompo no miandany amiko, inona no azon’ny olona atao amiko »,
« Tsy handao anao mihitsy, na hahafoy anao akory Aho ».
Taloha fantatrao ireny tenim-pitiavana ireny, fa ankehitriny iainanao, ianao izay nandray ny Tompo, ireny teny ireny. Ny fitoriana an’i Jesoa Kristy, dia fanambarana amin’ny olona ny làlana nafahanao hiaina ireny teny ireny. Fanambarana ny toky, hery, fifaliana, azonao raha nandray Azy. Fanambarana ny fifandraisanao amin’i Jesoa Kristy Tompo ny fitoriana.
Ny fitoriana dia fanambarana amin’ny olona toriana, fa ny Tompo dia tena tia azy koa, ka iaino izany Fitiavany izany amin’ny fandraisana Azy.
Fanehoam-pitiavana lehibe ny fitoriana an’i Jesoa Kristy. Mivavaha ho an’ireo notorianao mba hifidy ny fiainana izy ireo, dia ny fandraisana an’io Fitiavana io, izay tsy iza akory fa i Jesoa Kristy.
3. Ny olona manatanteraka ny baikon’ny Tompo, ary ao anatin’izany ny baikom-pitoriana Azy, dia novain’ny Tompo sata. Tsy mpanompon’ny Tompo intsony irery fa lasa sakaizany. Misy zava-dehibe mihoatra izany ve?
Tia anao ny Tompo. Fa izao anefa : ny maha sakaizan’ny Tompo anao, dia tsy sata ahafahanao miady hevitra raha tokony ho tanterahina na tsia, ny baikon’ny Tompo. Ny maha sakaizany anao dia zo omeny anao hahalala ny anton’ny baikony, ary anisan’izany ny antony hitorianao.
4. Inona izany atao hoe fitoriana mahomby? Ao ireo hamaly hoe : mahomby ny fitoriana satria betsaka ny olona voavory, na betsaka ireo olona voatory nanaiky handray ny Tompo. Fomba fandrefy iray izany.
Ny fomba fandrefy iray hafa dia ity : mahomby foana ny fitoriana rehefa tafaray amin’ny Tompo foana ianao. Rehefa avelanao hanatanteraka ny sitrapony aminao ny Tompo, dia mahomby foana ny fitoriana ataonao. Aza manao hoe tsy mahay mitory aho. Firifiry ireo olona, zara raha mahay mamaky teny sy manoratra, misy aza tsy mahay izany akory (jereo ny apôstôly Petera) fa tena mahery mitory an’i Jesoa Kristy. Ary mitombo zato heny, arivo heny ny asany.
Noho izany, tsy natao ho an’olona voatokana amin’izany ny fitoriana, fa ny fitoriana dia safidy, fanapahan-kevitra, fomba fiaina. Ny ho toriana dia Jesoa Kristy voahombo irery, fa ny fomba hanatanterahana izany no samihafa. Raha ny amintsika, dia ny mitety trano (izay antsointsika hoe « Tafika masina« ) no fomba hanatanterahantsika izany. Ento am-bavaka ny fitoriana an’i Jesoa Kristy, ny tafika masina hotanterahantsika. Hangataho amin’ny Tompo mba ho eo ambanin’ny fitarihany, eo ambanin’ny fitantanany izany.
« Vavaka » no herin’ny fitoriana. Mivavaha ka aza mitsahatra. Ny zavatra iray azo antoka eo amin’ny fiainana kristianina dia ny baikon’ny Tompo hoe : Torio Izy. (Tandremo : Jesoa Kristy no asaina torianao fa tsy ny hevitrao).